SM, JYP နဲ့ YG တို့ ဘယ်လိုလူတွေကို အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရွေးတတ်ကြတာလဲ… ? | News Bar Myanmar
SM, JYP နဲ့ YG တို့ ဘယ်လိုလူတွေကို အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရွေးတတ်ကြတာလဲ… ?
SM, JYP နဲ့ YG တို့က Kpop လောကရဲ့ နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီတွေပါ။ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုချင်းစီဟာ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရွေးပုံရွေးနည်းချင်းမတူပါဘူး။ Kpop အဖွဲ့တိုင်းလိုလိုမှာတော့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ မရှိမဖြစ်ပါပဲ။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ဟာ အဖွဲ့မိတ်ဆက်တာကစလို့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ညွှန်ကြားပေးရတာတွေ အဖွဲ့ကိုယ်စားပြု ကုမ္ပဏီနဲ့ စကားပြောရတာတွေ အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုး လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရွေးချယ်မှုဟာ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ကုမ္ပဏီအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ SM, JYP ရဲ့ YG ဟာ ကုမ္ပဏီအလိုက် ရွေးချယ်ပုံချင်း ကွာခြားကြပါတယ်။
SM Entertainment ရဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရွေးချယ်မှု ပုံစံကတော့ အဖွဲ့ရဲ့ အသက်အကြီးဆုံးသူကို အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ်ထားခြင်းပါပဲ။ ဒါကတော့ SM မှမဟုတ်ပါဘူး အချို့ Entertainment ကုမ္ပဏီတွေလည်း ဒီရွေးချယ်မှု လမ်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးကြပါတယ်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ အသက်ကြီးသူအပေါ်မှာ ရိုသေလေးစားမှုရှိရမယ်ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီနည်းလမ်းဟာ အံ့ဩစရာမရှိပါဘူး။ ဒီနည်းလမ်းကို SM ရဲ့ အဖွဲ့တော်တော်များများမှာ တွေ့ရပါတယ်။ TVXQ, Super Junior, Girls Generation, Shinee နဲ့ Red Velvet တို့ရဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အဖွဲ့မှာ အသက်အကြီးဆုံး သူတွေပါ။
ခြွင်းချက်အနေနဲ့ကတော့ EXO ရဲ့ Suho ပါ။ Suho ကိုတော့ အခြား EXO အဖွဲ့ဝင်တွေထက် လေ့ကျင့်မှုသက်တမ်း၊ အတွေ့အကြုံ ပိုများတဲ့အတွက် ရွေးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
JYP ရဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရွေးချယ်မှု ပုံစံကတော့ လေ့ကျင့်မှုသက်တမ်း အများဆုံး အဖွဲ့ဝင်ကို အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ပါတယ်။ JYP အဖွဲ့တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ JB (GOT7), Jihyo ( Twice) နဲ့ Bang Chan ( Stray Kids) တို့ဟာ အဖွဲ့ထဲမှာ လေ့ကျင့်မှုကာလ သက်တမ်းအများဆုံးရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြွင်းချက်ကတော့ ITZY ရဲ့ Yeji ပါ။ ITZY အဖွဲ့ရဲ့ လေ့ကျင့်မှု သက်တမ်းအများဆုံးရှိတဲ့ အဖွဲ့ဝင်ကတော့ Chaeryeong ဖြစ်ပါတယ်။
YG ရဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရွေးချယ်မှုကတော့ အဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းတွေ ရေးတာမှာ အများဆုံး ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ရွေးချယ်တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် YG ရဲ့ အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Big Bang, Winner နဲ့ iKON တို့ရဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းအများဆုံးရေးတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေပါ။
(Zawgyi) SM, JYP နဲ႔ YG တို႔ ဘယ္လိုလူေတြကို အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေရြးတတ္ၾကတာလဲ… ?
SM, JYP နဲ႔ YG တို႔က Kpop ေလာကရဲ့ နာမည္ႀကီး ကုမၸဏီေတြပါ။ ကုမၸဏီ တစ္ခုခ်င္းစီဟာ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေရြးပုံေရြးနည္းခ်င္းမတူပါဘူး။ Kpop အဖြဲ႕တိုင္းလိုလိုမွာေတာ့ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဟာ မရွိမျဖစ္ပါပဲ။
ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ့ တာဝန္ဟာ အဖြဲ႕မိတ္ဆက္တာကစလို႔ အဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ညႊန္ၾကားေပးရတာေတြ အဖြဲ႕ကိုယ္စားျပဳ ကုမၸဏီနဲ႔ စကားေျပာရတာေတြ အစရွိသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္မႈဟာ အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ကုမၸဏီအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ SM, JYP ရဲ့ YG ဟာ ကုမၸဏီအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ပုံခ်င္း ကြာျခားၾကပါတယ္။
SM Entertainment ရဲ့ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္မႈ ပုံစံကေတာ့ အဖြဲ႕ရဲ့ အသက္အႀကီးဆုံးသူကို အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ထားျခင္းပါပဲ။ ဒါကေတာ့ SM မွမဟုတ္ပါဘူး အခ်ိဳ႕ Entertainment ကုမၸဏီေတြလည္း ဒီေရြးခ်ယ္မႈ လမ္းစဥ္ကို က်င့္သုံးၾကပါတယ္။
ကိုရီးယားနိုင္ငံဟာ အသက္ႀကီးသူအေပၚမွာ ရိုေသေလးစားမႈရွိရမယ္ဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈရွိတဲ့ နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီနည္းလမ္းဟာ အံ့ဩစရာမရွိပါဘူး။ ဒီနည္းလမ္းကို SM ရဲ့ အဖြဲ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ TVXQ, Super Junior, Girls Generation, Shinee နဲ႔ Red Velvet တို႔ရဲ့ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အဖြဲ႕မွာ အသက္အႀကီးဆုံး သူေတြပါ။
ႁခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ EXO ရဲ့ Suho ပါ။ Suho ကိုေတာ့ အျခား EXO အဖြဲ႕ဝင္ေတြထက္ ေလ့က်င့္မႈသက္တမ္း၊ အေတြ႕အၾကဳံ ပိုမ်ားတဲ့အတြက္ ေရြးခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
JYP ရဲ့ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္မႈ ပုံစံကေတာ့ ေလ့က်င့္မႈသက္တမ္း အမ်ားဆုံး အဖြဲ႕ဝင္ကို အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ JYP အဖြဲ႕ေတြရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ JB (GOT7), Jihyo ( Twice) နဲ႔ Bang Chan ( Stray Kids) တို႔ဟာ အဖြဲ႕ထဲမွာ ေလ့က်င့္မႈကာလ သက္တမ္းအမ်ားဆုံးရွိတဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႁခြင္းခ်က္ကေတာ့ ITZY ရဲ့ Yeji ပါ။ ITZY အဖြဲ႕ရဲ့ ေလ့က်င့္မႈ သက္တမ္းအမ်ားဆုံးရွိတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ကေတာ့ Chaeryeong ျဖစ္ပါတယ္။
YG ရဲ့ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္မႈကေတာ့ အဖြဲ႕ရဲ့ သီခ်င္းေတြ ေရးတာမွာ အမ်ားဆုံး ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ YG ရဲ့ အဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့ Big Bang, Winner နဲ႔ iKON တို႔ရဲ့ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အဖြဲ႕ရဲ့ သီခ်င္းအမ်ားဆုံးေရးတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ေတြပါ။
Next Chen ကို EXO က နှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ သတင်းစာ ကြေညာတွေထည့်ဖို့ ငွေကြေးစုဆောင်းနေတဲ့ "EXO-L ACE" »
Previous « အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ The Silence of the monsters ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးမှူစတင်